USAID oo billowday barnaamij cusub oo ganacsi iyo maalgashi oo Africa ah
Iyada oo 21-kii October ka hadlaysay Xeerka Kobaca iyo Fursadaha Africa (AGOA), Samantha Power, Maamulaha Hay’adda Mareykanka u qaabilsan Horumarinta Caalamiga ah (USAID), ayaa ku dhawaaqday daah-furka barnaamijka cusub ee ganacsiga iyo maalgashiga Africa ee ay USAID ka hergelineyso guud ahaan qaaradda.
Barnaamijkani waa dadaalka ugu muhiimsan ee USAID ee hoostagaya qorshaha guud ee dowladda Mareykanka ee lagu magacaabo Prosper Africa, waxa uuna ballaarin doonaa oo uu dardargelin doonaa ganacsiga iyo maalgashiga laba-geesoodka ah ee ka dhexeeya dowladaha Africa iyo Maraykanka, iyo sidoo kale ganacsiga u dhexeeya dalalka Africa.
Powel ayaa hoosta ka xarriiqday in maamulka Biden-Harris ay aqqoonsan yihiin in “90 boqolkiiba qulqulka maaliyadeed ee caalamiga ah ee aada dalalka dhaqaalahoodu soo kobcayo ay ka yimaadaan sharikadaha gaarka ah, oo aysan aheyn maalgelin dowladeed,” taasina “waa ganacsato iyo maalgashadeyaal, gudaha iyo kuwa caalamiga ah, kuwaasi oo ka caawin doona Afrikaanka in ay xaqiijiyaan nooca mustaqbal waara, oo madax bannaan oo ay muddo dheer raadinayeen.”
Tani waa sababta ay USAID ugu riyaaqsan tahay in ay ka mid tahay 17-ka hay'adood ee Dowladda Mareykanka ee ka wada shaqeeya hindisaha the Prosper Africa (Barwaaqada Afrika). Tan iyo sanadkii 2019-kii oo ahayd markii la bilaabay Prosper Africa, dowladda Maraykanka ayaa ka caawisay “ganacsatada iyo maalgashadeyaasha in ay galaan in ka badan 800 oo heshiisyo ah oo ka dhacay ilaa 45 dal oo Afrikaan ah, abuurista qiyaastii $ 50 bilyan oo agabyada dhoofka iyo maalgashiga ah iyo in kumanaan shaqo oo gudaha iyo dibedda ahba la abuuray.”
Daah-furka Barnaamijka Ganacsiga iyo Maalgashiga Africa ee USAID waxa uu ka tarjumayaa sida ay dowladda Maraykanku uga go’an tahay xoojinta xiriirka ganacsiga gaarka ah ee u dhexeeya dowladaha Africa iyo Maraykanka, taasi oo dhiirigelinaysa maalgashi uusan heerkiisu marnaba la mid noqon karin deeqaha shisheeye oo keli ah, iyo in lala howlgalo shucuubta qaaradda Africa oo idil si loo xaqiijiyo aragti lagu mideysan yahay oo la xiriirta gaarista mustaqbal wanaagsan.
“Barnaamijka Ganacsiga iyo Maalgashiga Africa ee [USAID] waxa uu dhowrka sano ee soo socda noqon doonaa dadaalkeenna ganacsiga gaarka loo leeyahay, annaga oo aas-aaseyna xafiisyo cusub oo ay USAID taageerto oo ujeedkuna yahay in la dhiirigaliyo maalgashiga gobolka Waqooyiga iyo kan Saxahara ka hooseeya ee Africa,” ayay tiri Power oo ah Maamulaha USAID.
“Barnaamijkani ayaa mudnaan siin doona fursadaha kobcinaya awood-siinta dhaqaale ee haweenka iyo dhallinyarada, fursadaha lagu yaraynayo saamaynta isbeddelka cimilada, ama fursadaha ka caawinaya dalalku in ay si wanaagsan dib uga soo kabtaan cudurka safmarka ah ee COVID-19,”
“Waxa aan maanta sii xoojineynaa ballan-qaadkeenna, sababtoo ah waxa aan ognahay in ganacsiga iyo maalgashiga u dhexeeya qaramadiina iyo qarankeenna uu yahay mid la wada guuleystay (win-win),” ayay tiri Power, oo intaasi raacisay, “Maamulka Biden-Harris waxa uu si qoto dheer u aaminsan yahay Africa, waxa aanna si fog u aaminsannahay ruuxda hal-abuurka iyo curinta leh iyo saameynta dadka Afrikaanka ah.”